Hosy nahitana loaka, lavaka Hss, fahitana lavaka Tct - Hangjie
mpamaky fitaratra avo lenta
Leqing City Hangjie Tools Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Wenzhou, faritanin'i Zhejiang, Sina, tanànan'ny Leqing City Qingjiang. Ny famokarana orinasa dia manana tantara lava, hery ara-teknika matanjaka, teknolojia fanodinana mandroso, ary vidiny mirary hanitarana ny tsena, miaraka amin'ny serivisy tena tsara hampiroboroboana ny fampandrosoana, tapa-kevitra ny hamorona mamiratra amin'ny indostrian'ny fitaovana fitaovana.
Tungsten firaka Hinges bitika
brazing brazing Multi-functional fitaratra loaka misokatra ...
lavaka HSS haingam-pandeha haingam-pandeha
Kitapo lavaka vy an'ny tungsten
Ny fanafarana sy fanondranana any Shina ao anatin'ny roa volana voalohany amin'ity taona ity dia mihoatra lavitra noho ny nantenain'ny tsena
Ny fampidirana sy fanondranana entana any Shina tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity dia nihoatra lavitra noho ny nandrasana tamin'ny tsena, indrindra hatramin'ny 1995, araka ny angon-drakitra navoakan'ny General Administration of Customs tamin'ny 7 martsa. Ho fanampin'izay, ny varotra sinoa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe dia nitombo si. ..
Fanadihadiana sy fanombatombanana ny toe-draharahan'ny fanafarana entana any Shina tamin'ny 2021
Eo ambanin'ilay toe-javatra marimaritra iraisana fa voafehy ny valan'aretina manerantany, miverina miadana ny toekarena manerantany, ary mitombo tsy mitsaha-mitombo ny toekarena sinoa, tombanana ho 4,9 trillion dolara amerikana ny totalin'ny fanafarana sy fanondranana an'i Shina tamin'ny taona 2021, miaraka amin'ny taona iray isan-taona fitomboana eo amin'ny 5,7%; ...
Ny sehatry ny fanafarana sy ny fanondranana any Shina dia mbola miatrika fisalasalana bebe kokoa amin'ny 2021
[Mpanangom-baovao Global Times Ni Hao] tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny 2021, dia nanomboka fanombohana tsara ny fanafarana sy fanondranana an'i Shina, ary ny tahirin-kevitra momba ny fiakarana maranitra isan-taona dia nihoatra ny nandrasana tamin'ny tsena. Ny haben'ny fanafarana sy ny fanondranana dia mihoatra lavitra noho ny tamin'ny vanim-potoana io ihany ...